Nanaisotra Mubarak Iray Ve i Morsi Dia Manapaka Aterineto Ao Amin’ny Kianja Tahrir ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2012 14:50 GMT
Mitatitra fahatapahan'ny aterineto ireo Ejiptana mpikirakira aterineto manodidina ny kianja Tahrir, ilay fon'ny revolisiona Ejiptiana.
Io dia mitondra ho ao an-tsaina avy hatrany ny zava-nitranga tamin'ny andro faharoan'ny fanombohan'ilay revolisiona Ejiptiana rehefa notapahana ny fahafahana miditra aterineto tao Ejipta ny 26 Janoary 2011.
Niverina teo an-kianjan'i Tahrir ny Ejiptiana io Zoma io mba hanao hetsi-panoherana ny fanangonam-pahefana midadasika nomen'ny filoha vaovaon-dry zareo azy tenany Mohammed Morsi ihany. Araka ireo tati-baovao, dia nolemen'i Morsi ny fahefam-pitsarana, tamin'ny nanambaràny fa tsy manana alàlana hanohitra ny fanapahan-keviny ny fitsaràna. Nahatezitra ny Ejiptiana io, izay niverina marobe nankeny amin'ny kianja Tahrir hanohitra ny ambaran-dry zareo fa Farao vaovaon'i Ejipta sy ny fikambanany Firahalahiana Silamo, izay lazain-dry zareo fa manao ampihimamba be loatra ny fahefana.
Ndeha hiverenana ny fahatapahan'ny aterineto, mitatitra i Jadaliyya :
@jadaliyya: Tatira: nihantona daholo ireo tambajotra finday&aterineto ao Tahrir. Minisitry ny Fifandraisan-davitra: “Politika tsy misy idirako ireo”
Majdi Abdelhadi maneso hoe :
@maegdi: tatitra momba ny fanapahana aterineto sy fandrakofana tambajotra finday ny faritr'i Tahrir .. tafaverina ve i Mubarak ? #egypt
Ary ny hafa mahita ilay fanapahana aterineto ho fihetsika iray goavana, hisarihana vahoaka maro kokoa ho eny an-dalambe. Hoy i Tarek Mostafa :
@TarekMostafa: Ireo Ejiptiana mpibitsika dia milaza ilay fahatapahana tambajotra finday&Aterineto ho fiantsoana ny olona hanatevin-daharana ny hetsi-panoherana. #Egypt #Nov23 #Tahrir
Araka ireo mpikatroka mafàna fo, io no fahatapahana aterineto nahasintona olona an-tapitrisany hidina an-dalambe tany ampiandohan'ny revolisiona Ejiptiana, nitondra tamin'ny firodanan'ny fitondrana naharitra 32 taonan'ny filoha Hosni Mubarak, taorian'ny andro 18 nisianà fanoherana goavana .
Ao amin'ny Twitter, Mai Abdelqader mibitsika hoe :
@Mai_AbdelKader: #Morsi, mamerina ny endri-javatra fony #Mubarak, sady manapaka ny #Internet ao amin'ny faritr'i #Tahrir . #Cairo #Egypt
@Mai_AbdelKader: Dia mety ho izany kaondrana izany tokoa va re i #Morsi ka hanapaka ny #Internet indray? Tsy mampino #Tahrir #Egypt
Ary Samar Elhussieny manamafy hoe:
@S_Elhussieny: tambajotranà Aterineto & fifandraisan-davitra tapaka ao #Tahrir SQ #Egypt #23nov